Maah maahyo soomaaliyeed oo 70 gaaraayo
Sucuudiga Kamay Iman Waxaa Rag Isa Siiyeene W/Q: Muj” Cali Xaraaro
Ilyas ” Bishii May 1990 ayaa rag gaarayey 114 qof u tagay Siyaad Bare…”
Sida loo soo jiidashada nin rag ah? Fiiri galay naftiisa
Aan wada hadalno waa aan heshiino. Aar qoyey dacawo la mood. Abaal dad galaa badan, dad gudaase yar. Abaal raaga rag baa leh, mid baaqdana haween baa leh, mid soo dhakhsadana xoolaa leh. Abeesada taan sanqarta iyo tan aammusan, tan aamusan baa la qaatay.
Abeesana dhul u eki bay wax ku dishaa waadaadna dad u eki. Abkeey dooli diloow, dad nool maas u dahaa Aburku inta aanu kugu tufin ayaa lagu tufaa Aburku intaanu kugu tufin, baa lagu tufaa. Abuur iyo waano abuur baa horreysey. Adduun i khatal. Adhi been wuu didaa beense ma dhutiyo. Adhi jiri ma kala abaal waydo.
Adhi jiri xil bay wadaagtaa. Adhi magantii ma barriiyo. Adhi shidho laga daayo. Adhi-jiri ma kala abaal weydo. Adin waa la dhibaa, ilna waa la dhawraa maahmaah xarafka B. Baadi nin aan lahayn bay agjoogtaa 2. Baahiyi qof kuu daran bay kuu geysaa. Baareey guur, oo sixnigaagana la guur. Baddu waa isku dhadhan. Badhi mag ma laha. Balaayo laba qad ha kuu jirto. Balaayo madax la qabtay leedahaye minjo la qabto ma laha.
Balaayooy buulkaagaa laga galaa. Ballan habeenimo, jarmaado subax buu leeyahay. Ballaysin bir ka adag. Ban waraabiyo gaala baqataba baraa la helaa. Bannaankaba arkaayow maxaa babac ku saaraaya Bannaankiis mare maradiisa geed ma qabsado Baqal fardo la miratay dhigood bay is moodaa. Barasho horteed dad ha nicin Barasho horteed ha i nicin Barasho u yeelo geedkaad cugsan doonto. Bari waaga mooyee wax san kama yimaadaan. Barrooriba buulkeeday ku hartaa. Bartii yaqaan, bari uma korodho.
Bartii yaqaannbar xoolaad kuma korodho. Baruur qudhuntay baa baruuro badan qudhmisa Baruuro sabool, badhaadhaa leh. Baryo badan iyo bukaan badanba waa laysku nacaa. Baryo iyo is daluuc layskuma daro. Basari buulkeeda bayaayo waaye Baso waa baso si kastoo loo subko. Bawdo rag, maalinba midbaa qaawan. Beec-mushtar bilowgiis bur iyo bajiye waaye.
Been doode been buu dhaartaa. Been fakatay runi ma gaadho. Beeni raad ma leh. Beentaada hore runtaada danbay u xuntahay. Beentaada hore, runtaada dambey dishaa. Beentaada hore, runtaada danbey u daran tahay. Belaayo guur bay ku tiraahdaa ama guurso. Belaayo hor la qabtay leedahay ee dabo la qabto ma leh. Belaayo kaa sii jeeda layskuma soo jeedsho. Belo markay adiga kaa maqan tahay, qayrkaa bay ku maqan tahay Bidaari sibiq bay kugu gashaa. Bidaari sibiq bay kugu gashaa. Bilaysini Bir ka adag Bililiqo doon waa nabad diid.
Bil-saddex reerkaagana waa kaa kaxaysaa, reer kalena kuuma geyso Bir baa bir goysa. Birta adag dab ayaa lagu jilciyaa. Bisayl iyo ceedhiin waxa u dhexeeya waa yac-yacood Bisqin rag bay kuu gaysaa ragse kaama celiso. Biya sar tegey waa la sugayaa Biyahaan fiiqsi loo liqin, iyo hadalkaan fiirsi loo oran feerahay wax yeelaan. Biyo ay horotood dhooqo tahay, dabadooda maxaad mooday.
Biyo gorore oo meel godan bay isugu tageen. Biyo sacabbadaadaa looga dhergaa. Biyo socdaa biyo fadhiyey kiciyaan. Aqoon xumo abaar ka daran qorsho xumo abaar ka daran Arin nin la toosan ayaa nin kale tuur la leh. Aroos lagama raago, lagumana raago. Arrad waa dan uskagse waa doqonniino Arrimo rag waa mudacyo afkood. Arrin aan sidii futo riyaad la feydin, ma fayoobaato. Arrin kaa tagtat Ahaa sooma celiso. Arrin xumo abaar ka daran Share this:.
Daahdaahow hortiis dafo waaye Arrin degdeg u baahan lagama daaho sida heblaayo aad ogayd ooy hebel. Daawo tiro wax kuma tarto. Dab aan ku gubin kulaylkiisa ma ogid. Dab ama hadal baa lagu bakhtiiyaa ama biyo. Dab iyo xanuun meel ma wada fadhiistaan. Dab munaafaq shiday baa duul dhan guba. Dabaan kuleelkiisa la arag danbaskiisa lagama leexdo.
Dabada iiga qor anigaa durugsan doonee Ma dhiirrado nin aan garab wax lagula dhisayni. Dabeecad xuma dad kaa saartay. Dabeecaddu diinta waa ka badh. Dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa. Dacartuba mar bay malab dhashaa. Dacas iyo dameeraba lama kala laha. Dacas kaa wayni dhiiqaday kugu farjiyaan. Dacawadii tallaabada nebiga ku dayatay, teediina ka tagtay tu kalena gaari weydey. Dacawo duul-duul badan af libaaxeey dalaq dhahdaa.
Dad iyo weel godanba waa la badsadaa weelka godan biyahaa ku urura. Dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hanfiyaan. Dad wax ugu liita ma tashe ma toshe ma tashiishe. Dad wax yar tare ma ahee, wax ma tare ma leh. Dad waxa ugu muran badan jaxar iyo jaahil. Dad waxa yaqaan nin tuugsaday iyo nin u taliyey. Dad waxaa yqaan nin tuugay iyo nin u taliyey.
Dadku hadalkay isku afgartaan xooluhuna urta. Dadqal looma gurguurto. Dagaal qofbaa ku dhintee qof kuma dhasho. Dagaal wiil kuma dhashee, wiilbaa ku dhinta.
Daleel marow maradiis geed ma daarow. Dameer dhaan raac. Dameer waa dameer sidii goodirkaba haw boodee. Dameeraha Adari qofkii oodda ka qaadaa aroorsa. Dameeraha Awdal ninkii ooda ka rogaa arroorsha. Dameeraha ta ugu xun baa ugu haraati kulul. Dameeraha ta ugu yar baa ugu biqlo badan. Dameeri dhaan raacday. Dameeri isku hallayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa. Dameero awdalan ninkii ooda ka qaadaa arooriya. Dameertu geel-didiska khuruf-khuruftay kaga dartay. Dameertu inta aanay cida baran ayey dhuusada barataa.
Dameertu isku halayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa. Dameertu ma hadhsato ilmaheedana ma hadhiso. Dammeeraley Dad la xeer maaha. Dan iyo xarrago is weyday.
Dan layskuma naco. Dantaada derin karkaranna waa loogu seexdaa. Dantaada iyo madaxaaga midna lagama boodo. Dantaadana, maqaar eybaa loogu seexdaa. Dantii mooge, maro duuga ka liitee. Dantu ceebba ma lahee dadkuun baysku nacaya. Darandoorriyaaba naas-naasi Nin ordaaba istaag Dardaaran caweysin kallah arooryaad buu leeyahay Arrin la qorsheeyey meel laga bilaaboayey leedahay.
Dardaaran waa inta xayga la yahay. Dawaco geel ma cunto. Dawaco meeshay macal idood ku baratay, macaluul ugu bakhtidaa. Dawarsato dariiqay ku collowdaa. Deriskaa dagaalkaaga rabaa, dooradaada ceshaas ku dhahaa. Deriskaaskaa marna ku dayo marna ku diin. Dhabada yari dhabada wayn bay kugu ridaa. Dhac dushii laguma wada hadlo. Dhadhan shaa waalan dhergaana ka sii daran.
Dhagar qabe dhulkaa u dhaq-dhaqaaqa. Dhagax meel dhow buu ku dhacaa, hadalna meel dheer. Dhagax tuujin iyo taabasho waa isugu mid. Dhalaan dheelaa baradi, dhusuntaa far koo galiyee?
Dhalaan qayladu waa qaboonada. Dhaliili dhaban bay ku taal. Dhalinyaro dhubuq dhubuq hore dhabana hays danbay leedahay. Dhallaan dhargay fartaa loo lulaa way iska qoslayaan Dhallaan qayladii waa qaboonada. Dhar kaa dheer dhaxan kaama reebo. Dhaxal gorayo dhabad baa leh. Dhaxal goroyo dhebed baa iska leh. Dhedo roob noqon weydey. Dheere iyo gabane un baa jiree, Dhuubane majiro.
Dheerow ii gaabow yaa jaree, dhuubow ma jaro. Dheg haddii la jaro daloolkaa hara. Dheg wax xun maqlaysaa wax wacan ma weriso. Dhegta hadii la gooyo daloolkaa hadha. Dheriga karkaa maxaa ka keenay, kulayl weeye.
Dhib lagula qabo dhib ma eh. Dhicisku inta mindida loo soo siduu bakhtiyaa. Dhidar xabaalo qod bartay qudhin buu uga dhacaa. Dhiig islaan ma qarsoomo. Dhiil maran iyo dhiil buuxa la iskuma dhufto Wax aan isu qalmi la isma dhaafsado. Dhilaa la waaniyey markaasay tidhi ii dhakhsada rag bay sugayee. Dhillo, intaadan dhillo oran bay dhillo ku tiraahdaa. Dhilo garcatay mar horey ku nabad gashay.
Dhoofaa kaa dhimay! Dhoofaa kaa dhimay. Dhool bari ka soo kacaa dhaan loo nageeyaa. Dhubuq-dhubuq hore dhabanahays dambey leedahay. Dhur waa la tegis bartay ka ridistu waa ku ceeb. Dhurwaa dhoomo laguma rarto. Dhurwaabaa lagu yidhi fool xumadaa, markaasuu yidhi walaalkay weerana ma aragteen. Dhuumashada dhabarku muqdo dhuumasho ma aha. Dib u gurasho dib bay kuu dhigtaa. Dibi hooyo xumi hore uma koro.
Dibi hooyo xumi korme ma noqdo. Dibi hooyo xumi, hore ma noqdo. Dibi, bay waw dhutiyaa. Dix dhaaxood dhagax ka waa, hayeesa hangool ka waa.
Dad waxa ugu muran badan jaxar iyo jaahil. Dad waxa yaqaan nin tuugsaday iyo nin u taliyey. Dad waxaa yqaan nin tuugay iyo nin u taliyey. Dadku hadalkay isku afgartaan xooluhuna urta.
Dadqal looma gurguurto. Dagaal qofbaa ku dhintee qof kuma dhasho. Dagaal wiil kuma dhashee, wiilbaa ku dhinta. Daleel marow maradiis geed ma daarow. Dameer dhaan raac. Dameer waa dameer sidii goodirkaba haw boodee. Dameeraha Adari qofkii oodda ka qaadaa aroorsa. Dameeraha Awdal ninkii ooda ka rogaa arroorsha. Dameeraha ta ugu xun baa ugu haraati kulul. Dameeraha ta ugu yar baa ugu biqlo badan.
Dameeri dhaan raacday. Dameeri isku hallayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa. Dameero awdalan ninkii ooda ka qaadaa arooriya. Dameertu geel-didiska khuruf-khuruftay kaga dartay. Dameertu inta aanay cida baran ayey dhuusada barataa. Dameertu isku halayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa. Dameertu ma hadhsato ilmaheedana ma hadhiso. Dammeeraley Dad la xeer maaha. Dan iyo xarrago is weyday.
Dan layskuma naco. Dantaada derin karkaranna waa loogu seexdaa. Dantaada iyo madaxaaga midna lagama boodo. Dantaadana, maqaar eybaa loogu seexdaa. Dantii mooge, maro duuga ka liitee.
Dantu ceebba ma lahee dadkuun baysku nacaya. Darandoorriyaaba naas-naasi Nin ordaaba istaag Dardaaran caweysin kallah arooryaad buu leeyahay Arrin la qorsheeyey meel laga bilaaboayey leedahay. Dardaaran waa inta xayga la yahay. Dawaco geel ma cunto. Dawaco meeshay macal idood ku baratay, macaluul ugu bakhtidaa.
Dawarsato dariiqay ku collowdaa. Deriskaa dagaalkaaga rabaa, dooradaada ceshaas ku dhahaa. Deriskaaskaa marna ku dayo marna ku diin. Dhabada yari dhabada wayn bay kugu ridaa. Dhac dushii laguma wada hadlo. Dhadhan shaa waalan dhergaana ka sii daran. Dhagar qabe dhulkaa u dhaq-dhaqaaqa. Dhagax meel dhow buu ku dhacaa, hadalna meel dheer. Dhagax tuujin iyo taabasho waa isugu mid. Dhalaan dheelaa baradi, dhusuntaa far koo galiyee? Dhalaan qayladu waa qaboonada.
Dhaliili dhaban bay ku taal. Dhalinyaro dhubuq dhubuq hore dhabana hays danbay leedahay. Dhallaan dhargay fartaa loo lulaa way iska qoslayaan Dhallaan qayladii waa qaboonada. Dhar kaa dheer dhaxan kaama reebo. Ka dib oo dhan, hal marna saadaalin karaa ka hor halkaas oo ay kula kulmi doonaa iyada jacaylka. Laakiin waxa haddii doonanayd horeba maanka?
Sida loo soo jiidashada nin ee riyooyinkiinna aad? Dhowr qarsoon u garan lahaa naag kasta. Waxaad mar walba xusuusan waa in la ma aha oo kaliya tirada weyn oo quruxduna dibadda kaalin wayn ka ciyaaraan sidii naag. Gabdhaha yar yar, ku tiirsan yihiin oo kaliya on saamaynta lugaha caato ah oo wajiga soo jiidasho leh, oo aad u qaldan. Sida loo nin jiidashada, in uu doonayo ma aha oo kaliya in ay sameeyaan ammaan ah, laakiin sidoo kale in aad la nooshahay nolol?
Baro inaad isaga ka dhegaysataan. Isku day inaad si ay u fahmaan waxa dhacay iyo siday isaga ku nool yahay, waxa ku riyoonaya in ay qorshaynayso. Si tartiib ah isku day in aad u soo hadal qarsoodi ah. Haweenka Smart oo yaqaana sida loo captivate Khashuue ah nin iyo diirimaad, isku dayayaan in ay ku guuleysan inuu naxariis kaliya in. Dhegaysiga, kiis kasta, ha dhaleeceeyo. Bawdo rag, maalinba midbaa qaawan. Beec-mushtar bilowgiis bur iyo bajiye waaye.
Been doode been buu dhaartaa. Been fakatay runi ma gaadho. Beeni raad ma leh. Beentaada hore runtaada danbay u xuntahay. Beentaada hore, runtaada dambey dishaa. Beentaada hore, runtaada danbey u daran tahay.
Belaayo guur bay ku tiraahdaa ama guurso. Belaayo hor la qabtay leedahay ee dabo la qabto ma leh. Belaayo kaa sii jeeda layskuma soo jeedsho. Belo markay adiga kaa maqan tahay, qayrkaa bay ku maqan tahay Bidaari sibiq bay kugu gashaa.
Bidaari sibiq bay kugu gashaa. Bilaysini Bir ka adag Bililiqo doon waa nabad diid. Bil-saddex reerkaagana waa kaa kaxaysaa, reer kalena kuuma geyso Bir baa bir goysa. Birta adag dab ayaa lagu jilciyaa. Bisayl iyo ceedhiin waxa u dhexeeya waa yac-yacood Bisqin rag bay kuu gaysaa ragse kaama celiso.
Biya sar tegey waa la sugayaa Biyahaan fiiqsi loo liqin, iyo hadalkaan fiirsi loo oran feerahay wax yeelaan. Biyo ay horotood dhooqo tahay, dabadooda maxaad mooday. Biyo gorore oo meel godan bay isugu tageen. Biyo sacabbadaadaa looga dhergaa. Biyo socdaa biyo fadhiyey kiciyaan.
Night teer official
Posted in Sarbeeb rag
thoughts on “Sarbeeb rag”
05.08.2021 at 14:29
06.08.2021 at 08:57
09.08.2021 at 14:20
14.08.2021 at 15:48